ယခုခေတ်၏လေးစား အားကျ ဖွယ်ကောင်း သော စံပြမိသားစုအ ကြောင်း...! - Thadin
HomeKNOWLEDGEယခုခေတ်၏လေးစား အားကျ ဖွယ်ကောင်း သော စံပြမိသားစုအ ကြောင်း…!
May 16, 2019 Kay Kay KNOWLEDGE Comments Off on ယခုခေတ်၏လေးစား အားကျ ဖွယ်ကောင်း သော စံပြမိသားစုအ ကြောင်း…!
ကျွန်​တော်​တို့မိဘများဘက်​ကလည်း သားသားအတွက်​အချိန်​ပေးပြီး သားသားရဲ့ဆရာ/ဆရာမ တစ်​ဦးချင်းစီနဲ့ သားသားရှေ့မှာရော…သားသားကွယ်​ရာမှာပါ သွားရောက်​တွေ့ဆုံပြီး သားသားရဲ့ကျောင်းတွင်းအားနည်းချက်​ အားသာချက်​..လိုအပ်​ချက်​များကို ရင်းနှီးပွင်းလင်းစွာမေးမြန်းဆွေးနွေးပူးပေါင်းခဲ့တယ်​ဆိုတာ…တစ်​ကျောင်းလုံးအသိပဲဖြစ်​ပါတယ်​။
ပညာသင်​တယ်​ဆိုတာ…စိတ်​ကိုသင်​တာဖြစ်​တယ်​ …သားကို ဖေဖေတို့က .. A တွေအများကြီးရဖို့… သားကြီးလာရင်​…ဘာကြီးဖြစ်​ရမယ်​ဆိုတာထက်​… သားဝါသနာပါတဲ့ အရာကိုသာလွတ်​လပ်​စွာရွေးချယ်​ခွင့်​နဲ့ … ကိုယ်​နှစ်​သက်​လို့ရွေးချယ်​ထားတဲ့အပေါ်မှာ… တာဝန်​သိမှု…တာဝန်​ယူမှုရှိတဲ့… ပညာပြည့်​ဝနှလုံးသားလှတဲ့ တိုင်းပြည်​နဲ့လူမျိူးးအပေါ် တာဝန်​ကျေတဲ့သားကောင်းတစ်​ယောက်​သာဖြစ်​စေချင်​ကြောင်း သားသားကိုနားလည်​အောင်​…အမြဲတမ်းရှင်းပြထားပါတယ်​။
ကြှနျတျောတို့မိဘမြားဘကျကလညျး သားသားအတှကျအခြိနျပေးပွီး သားသားရဲ့ဆရာ/ဆရာမ တဈဦးခငျြးစီနဲ့ သားသားရှမှေ့ာရော…သားသားကှယျရာမှာပါ သှားရောကျတှဆေုံ့ပွီး သားသားရဲ့ကြောငျးတှငျးအားနညျးခကျြ အားသာခကျြ..လိုအပျခကျြမြားကို ရငျးနှီးပှငျးလငျးစှာမေးမွနျးဆှေးနှေးပူးပေါငျးခဲ့တယျဆိုတာ…တဈကြောငျးလုံးအသိပဲဖွဈပါတယျ။
ပညာသငျတယျဆိုတာ…စိတျကိုသငျတာဖွဈတယျ …သားကို ဖဖေတေို့က .. A တှအေမြားကွီးရဖို့… သားကွီးလာရငျ…ဘာကွီးဖွဈရမယျဆိုတာထကျ… သားဝါသနာပါတဲ့ အရာကိုသာလှတျလပျစှာရှေးခယျြခှငျ့နဲ့ … ကိုယျနှဈသကျလို့ရှေးခယျြထားတဲ့အပျေါမှာ… တာဝနျသိမှု…တာဝနျယူမှုရှိတဲ့… ပညာပွညျ့ဝနှလုံးသားလှတဲ့ တိုငျးပွညျနဲ့လူမြိူးးအပျေါ တာဝနျကတြေဲ့သားကောငျးတဈယောကျသာဖွဈစခေငျြကွောငျး သားသားကိုနားလညျအောငျ…အမွဲတမျးရှငျးပွထားပါတယျ။
ရန်ကုန်တိုင်းအစိုးရခွင့်ပြုထားသည့် အစ္စလမ်ဘာသာ ဥပုဒ်လ ၀တ်ပြုနေရာကို လူ ၂၀၀ ဖြင့်ဝိုင်း၍ ပိတ်ခိုင်း…!
This Month : 37705
This Year : 233103
Total Users : 592127
Total views : 2717607